IINGCAMANGO EZINGAMA-40 ZEPANCAKE TATTOO ZABANTU-IIYILO EZIHAKIWEYO ZEHOTCAKE - UHLOBO
Iingcamango ezingama-40 zePancake Tattoo zaMadoda-Uyilo oluHakiweyo lweHotcake
Akukho tafile yesidlo sakusasa imiselwe kakuhle ngaphandle kwenqaba yokuncanca i-pancake, kwaye le ntandokazi yaseMelika ibisisiseko ekhayeni ngaphezulu kwenkulungwane.
Ukukhumbuza izidlo zelanga kunye neenkumbulo ezifakwe kwisiraphu, iikeyiki kukuboniswa okuphezulu kokutya kokuthuthuzela. Kwaye ngenxa yokuba intuthuzelo inqabile kwezi ntsuku, i-pancake tattoo ngumbono owamkelekileyo kakhulu.
Abahlobo kunye nabantu abadlulayo ngokufanayo baya kuthi bakhothe imilebe yabo xa bebona umvambo wakho wepancake, kwaye ulangazelele umzuzwana wokuzonwabisa ngeplate ebilayo yeeshushu. Nokuba ukhetha i-motif yeediliya, ehamba nemibala eqaqambileyo kunye nemifanekiso ye-iconic, okanye ukhetha eyona nto iyinyani, inkampu emnyama kunye nomhlophe enikezela ngenki, itattoo yakho yepancake sisiqwenga sakho sasekhaya, nokuba uzulazula kangakanani.
imifanekiso yeethayile zeshawari ezinethayile
Ukwaziwa akunakuhlala kunikezelwa ebomini; Ngamanye amaxesha kufuneka sihambele kude nalapho sisuka khona kwaye sifumane lonke uhlobo olutsha lweencasa kunye neemvakalelo. Le yinto entle kakhulu, kodwa i-pancake tattoo iqinisekisa ukuba ukugoduka kwakho kuya kuba mnandi ngakumbi.
Ngentsasa yangeCawa ukuphatha kunye neklasikhi ephezulu, ubume bepancake kudala buqinisiwe kwinkcubeko yaseNtshona kwaye ngoku, enkosi, kwindawo yokugcina tattoo. I-inki encinci yentsomi eluthandayo kulusu lwakho ayisiyonto ingathandekiyo, kodwa isenzo seinshurensi ngokuchasene nokungaqiniseki kobomi.
Isenokungathathi ndawo yento yokwenyani, kodwa itattoo yakho yepancake iza kuza isondele kakhulu.
Isifuba sogquma iitattoo imibono yabasetyhini
rose tattoos emnyama nengwevu
ifestile yebhloko yeglasi yanamhlanje kwishawari
Ithenda yekrisimesi enobuchule kunye nezixhobo
ungabeka i-sunscreen kwi-tattoo entsha
izimvo zokulala ezingwevu nezimhlophe
incinci iqhawe lam lemfundo ye tattoo